Nezvedu - TMTeck Chishandiso Co., Ltd.
TMTeck Chishandiso Co, Ltd. (inohushure: TMTeck) inotungamira NDT vagadziri nevatengesi muBeijing China uye inopa hunyanzvi hwetekinoroji uye yakazara yekuziva-nzira yekubatsira vatengi mune dzakawanda nyika pasi rese. Kusvika ikozvino, TMTeck yanga ichishanda. munzvimbo dzehunyanzvi-inotungamirwa yekuongorora mhinduro dzinounza kugadzirwa, mhando uye chengetedzo.
Yakatanga kubva kuUltrasonic Transducers uye Coating Thickness Gauge, ikozvino TMTeck yakagadzira zvinopfuura gumi zvakateedzana zvezviridzwa zvekuyedza, kusanganisira Ultrasonic Flaw Detector, Kuputira Ukobvu Gauge, Kuomarara Testers, Ultrasonic Ukobvu Gauge, yavo accessories uye zvimwe NDT zviridzwa. Izvi zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukuongororwa kwezvinhu zvinogonesa vatengi vedu kuongorora, kudzora uye kusimbisa maitiro avo akakosha uye mashandisiro, zvakare zvinhu zvedu zvine zvitupa zveEC.
TMTeck yakazvipira mukuchengetedza kwenguva refu kudyidzana nevatengi vedu nekupa zvisingaenzaniswi masevhisi, tekinoroji kuraira uye rubatsiro. Isu tinogadzira uye tinogadzira akasiyana siyana epamusoro ekuita NDT michina uye zvishongedzo. Tichienderera mberi nekusimbisa kukoshesa kwevatengi uye kukwikwidza kwepasirese, TMTeck yagara iri imwe yepamusoro soro yemakambani epasi rose kana zvasvika pakutungamira muzvishandiso zveNTT. Uye isu tiri kugadzira zvigadzirwa zvitsva maererano nezvinodiwa musika. Tinogona kupa vimbiso yakanaka kune vatengi vedu.
Munhu Akaita Kukuvadza
Kana icho chigadzirwa chave pasi pekushungurudzwa, tsaona, shanduko, kugadziridzwa, kukanganisa, kushaya basa, kushandisa zvisirizvo, kana kugadziriswa kana kushandirwa nemunhu chero asina kupihwa mvumo yekuita sevhisi, kana asina kadhi rekuvimbisa, kambani yedu haizove basa rekugadzirisa.
Kana icho chigadzirwa chiri kudiwa mukati menguva yevimbiso (kunze kwekusiri-kwekugadzirisa zvishongedzo), ndokumbira utumire chigadzirwa kuti chigadziriswe nekodzero yevimbiso kadhi. Kana zuva rekukuvara kwechigadzirwa rapfuura, kambani yedu ichabhadharisa kuti igadziriswe.
Chigadzirwa chekambani yedu chinogona kugadziridzwa mahara mukati memakore maviri. Zvakare kugadzirwa kwehupenyu hwese kwevagadziri.
Mushandisi anofanira kuzadza kadhi iri uye kutumira kumashure kukambani yatenga chigadzirwa, zvikasadaro, chigadzirwa hachigadziriswe mahara.
TMTeck Kugadzira Limited yakavambwa, yedu yekutanga mhando yechigadzirwa yakatangwa zvinobudirira- nhevedzano yekumhanyisa ukobvu geji
akateedzana eiyo ultrasonic kukanganisa detector inobuda, ichifarira mukurumbira wepamusoro muEuropean uye America nyika.
akateedzana Leeb Kuoma Tester kuuya kumusika zvinobudirira, musika reated zvakasimba ..
yedu Beijing kambani TMTeck Chishandiso Co., Ltd yakavambwa ..
chigadzirwa chemureza -Ultrasonic Ukobvu Gauge yakabudirira kugadzirwa, kutyaira iko kuita kunopfuura miriyoni imwe.
akabudirira kugadzira tekinoroji yekuita ese marudzi eepuro ultrasonic anogona kusangana nezvinodiwa zveGE, OLYMPUS nedzimwe nyika dzekumadokero 'zviridzwa.
fekitori yedu Yakafambisa nzvimbo nyowani yeindasitiri, musangano wefekitori ndeye 300m², Yakanyanya kuwedzera kugona kwekugadzira.
iyo nyowani yekunze sensor mhando Roughness Tester TMR360 yakapinda mumusika zvinobudirira Uye yakanakidzwa nemukurumbira mukuru muiyi indasitiri.
kuitira kuzadzikisa zvido zvevatengi veNorth America, takagadzira michina miviri-yekristaro yeDA yakateedzana uye mamwe macomputer macrystal transducers, ane hukuru hwekunzwisisa kupfuura maGE.
isu takazvipira kutsvagisa nekusimudzira eddy yazvino weld chinokanganisa michina, uye tichakurumidza kuvhura indasitiri-inotungamira izere-dhijitari eddy yazvino chikanganiso michina inoenderana neEU zvinodiwa EN1711-2000 uye yenyika zviyero GB / T26954-2011.
TMTeck yakazvipira mukuchengetedza kwenguva refu kudyidzana nevatengi vedu nekupa zvisingaenzaniswi masevhisi, tekinoroji kuraira uye rubatsiro.
- TMTeck Chishandiso Co., Ltd.
Kuchengetedza Bvunzo Bvunzo, Calibration Mabhokisi, Pipe Calibration Zvidhinha, Ultrasonic Transducer Tambo, Ut Test Bvunzo, Ultrasonic Calibration Block,